Akụkọ - Gịnị bụ electrolytic (ED) ọla kọpa foil na otú o si eme?
Gịnị bụ electrolytic (ED) ọla kọpa foil na kedu ka o si eme?
Electrolytic ọla kọpa foil, foil metal ahaziri nke kọlụm, bụ nke a na-ekwukarị na a na-eji usoro kemịkal rụọ ya, usoro mmepụta ya dị ka ndị a:
Na-agbari: A na-etinye mpempe akwụkwọ ọla kọpa akụrụngwa electrolytic n'ime ngwọta sulfuric acid iji mepụta ngwọta sulfate ọla kọpa.
Na-akpụ: A na-eme ka mpịakọta ígwè (na-emekarị titanium mpịakọta) na-enye ume ma tinye ya n'ime ngwọta sulfate ọla kọpa ka ọ gbanwee, akwụkwọ mpịakọta ígwè a na-ebubo ga-eme ka ions ọla kọpa dị na ngwọta ọla kọpa sulfate dị n'elu ogwe mpịakọta ahụ, si otú a na-emepụta ọla kọpa. Ọkpụrụkpụ nke foil ọla kọpa na-ejikọta ya na ntụgharị ntụgharị nke mpịakọta ígwè, ngwa ngwa ọ na-agbagharị, na-eme ka ọkpụkpụ ọla kọpa na-esiwanye ike; ọzọ, ka ọ na-eji nwayọọ nwayọọ, ka ọ na-adịwanye ukwuu. Elu nke mkpuchi ọla kọpa nke a na-emepụta n'ụzọ dị otú a dị mma, ma dị ka ihe mkpuchi ọla kọpa nwere ihe dị iche iche dị n'ime na n'èzí (otu akụkụ ga-ejikọta na rollers metal), akụkụ abụọ ahụ nwere dị iche iche siri ike.
Na-eme ihe ike(nhọrọ): A na-agbaji n'elu ihe mkpuchi ọla kọpa (na-emekarị ntụ ntụ ọla kọpa ma ọ bụ ntụ ntụ cobalt-nickel na-efesa n'elu ihe mkpuchi ọla kọpa wee gwọọ ya) iji mee ka ọkpụkpụ ọla kọpa dịkwuo njọ (iji mee ka ike bee ya sie ike). A na-ejikwa n'elu na-egbuke egbuke na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ (electroplated na oyi akwa nke metal) iji mee ka ihe ahụ nwee ike ịrụ ọrụ na okpomọkụ dị elu na-enweghị oxidation na discoloration.
(Rịba ama: A na-eme usoro a naanị mgbe enwere mkpa maka ihe dị otú ahụ)
Agbawa ma ọ bụ Ịcha: A na-agbaji eriri ọla kọpa ma ọ bụ bee n'ime obosara achọrọ na mpịakọta ma ọ bụ mpempe akwụkwọ dịka ihe ndị ahịa chọrọ.
Nnwale: Bee ihe nlele ole na ole site na mpịakọta emechara maka nnwale nke mejupụtara, ike ike, elongation, ndidi, ike bee, ike siri ike, imecha na ihe ndị ahịa chọrọ iji hụ na ngwaahịa ahụ tozuru oke.
Nkwakọ ngwaahịa: Kwakọta ngwaahịa emechara nke na-agbaso ụkpụrụ na batches n'ime igbe.
Oge nzipu: Ọgọst-16-2021